Nagu saabsan - Dongguan Allwin Stationery Co., LTD
Dongguan Allwin xafiisyada xafiisyada Co., LTDwaxaa la aasaasay sanadkii 1999. Waxay ku taalaa Wan Jiang Area ee magaalada Dongguan, gobolka Guangdong. Waxaan aasaasnay ​​Allwin Industry (HK) International Limited sanadkii 2009. Ninghai Allwin xafiisyada xafiisyada Co., LTD waxaa la aasaasay 2010. Shirkadeenu waxay ku takhasustay soosaarka xafiisyada xafiisyada, waxyaabaha ugu muhiimsan waa gogosha gogosha, jarjarka wareega, warqad gooye, warqad feer, warqad dhajiye, xaashiyaha waraaqaha, laminator. Waxtarka sare iyo wax soo saarka qiimaha jaban, samaynta wax soo saarka our tayo leh heer sare ah, iyo qiimaha waa mid aad u tartan.
Shirkadeenu waxay leedahay awood aad u fiican oo ah qaabeynta wax soo saarka cusub waxaan leenahay waaxdeena R&D. Waxaan u siineynaa alaabooyinka macaamiishayada. Waxaan u furi karnaa caaryo cusub oo loogu talagalay soosaarka alaabada cusub ee macaamiisha, oo aan u hogaansanaano tilmaamaha ganacsiga. Ku soo dhawow iskaashiga OEM. Qaar badan oo Punchers ah oo ay soo saartay shirkadeena ayaa loo diiwaangaliyay shati qaran.
Shirkaddayada ayaa diiwaangashan sumadda "Allwin" waxay leeyihiin wakiillo badan inta badan gobollada iyo magaalooyinka gudaha, waxay ku kortay sumcad caan ah oo xafiisyada xafiisyada ah. Waxaan wakiil ku leenahay aag ka mid ah Koonfur-bari Aasiya iyo Ameerika.
Si aad u noqotid shirkad hormuud u ah warshadaha xafiisyada xafiisyada xafiisyada.
Shirkadaha iyo shaqaaluhu way isla koraan, waxay qiimo u abuuraan macaamiisha, waxayna qaadaan mas'uuliyadda bulshada.
Daacadnimo iyo waxqabad, hal abuur iyo ganacsi, naxariis iyo mahadnaq leh.
Aragti hibo shirkadeed
Nin waliba waa hibo u gaar ah.
Naqshadeynta alaabta kama dambaysta ah, waxqabadka qiimaha badeecada aadka u sarreeya, adeegga macaamiisha ee qiimaha weyn leh.